Kuyini ukushisa kwe-lymphatic drainage? Ukuphumula okuvela ezinyaweni zokuvuvukala.
Izici zokusikhipha kwamanzi emilenze yemilenze, izinkomba namasu.
Ngeshwa, umsebenzi nokuphila kwethu iningi lethu akusivumeli ukuziqhenya ngezempilo ezinhle kakhulu. Ukuzivikela okunamandla, ukukhathala okungapheli, ukunganaki, izifo zemithwa yegazi nesisu - akuzona zonke iziphuphutheki zomuntu omdala wesibili. Ikakhulukazi ethintekayo abantu banamuhla abavela ebukhukhuleni nasezintanjeni ze-varicose, ezivame ukuhlala endaweni emilenzeni. Yini okufanele uyenze kulolu cala, lapho imilenze ekhathele ivuvuka emthonjeni? Kuthiwani uma imifino eluhlaza okwesibhakabhaka ibonakala ngokucacile? Ukuzivocavoca umzimba kanye nemithi yokuqeda le nkinga ngeke kube ngokwanele. Kudingekile ukuthi usebenzise ukusikhipha kwamanzi ezinhlanzi zamanzi lymph.
I-lymphodrainage ihlaba kanjani imilenze?
Inqubo yalesi massage inomphumela omuhle ekujikelezeni kwesimiso se-lymphatic, esibuye siphume emzimbeni wethu ngokweqile kwamanzi, ubuthi kanye nama-radicals mahhala. Lokhu kuthinta kakhulu ekuqedeni ukukhukhumeza, ukwelashwa kwemivimbo ye-varicose, ukwehla okujwayelekile emtongeni wemilenze. Ukwengeza kulezi zindlela ezinhle, ngenxa yokuncipha kwe-lymph, ukuthuthukiswa komphakathi jikelele, lowo muntu uzizwa ukuqina okusha kwamandla, umgoqo wokuzivikela wokukhuphuka komzimba.
Ukuze kubonakale imiphumela yokuqala ebonakalayo, ukusikhipha umzimba kufanele kwenziwe kabili ngesonto izinyanga ezimbili kuya kwezintathu. Kuyinto efiselekayo ukuthi i-massage yenziwe ngumasters owaziwa noma udokotela owazi kahle indawo yama-lymph nodes.
Ayikho imingcele yobudala yokwenza le nqubo. Kodwa-ke, kunama-contraindications eziningana, kuhlanganise nezifo zesikhumba ezifayo nezifo ezithathelwanayo, ukusabela okwegazi, ukushisa, izifo ezincane ezinobungozi nezifo ezincane, i-thrombophlebitis, isifo sikashukela, ukungasebenzi kwegciwane, ukushisa komzimba okuphakeme, ukukhulelwa nganoma isiphi isikhathi nokuncelisa.
Inqubo yokwenza i-lymph drainage foot massage
Ngaphambi kweseshini, isiguli kumele sithathe isikhundla se-supine. Umzimba kufanele ukhululeke, imilenze ivuliwe. Kule massage kuyoba usizo ukusebenzisa i-massage ngamafutha noma ukhilimu, okuzosiza ukulawula ingcindezi ezindaweni eziyinkinga.
Ngakho, udinga ukusebenza ngezandla zombili. Ukunyakaza kwemisipha kunomthelela we-stroking, ukucindezela okukhulu nokunyakaza kwe-wavy. Qala ukuhlunga okuvela ezinkalweni. Ukuze wenze lokhu, i-masseur kufanele ikwazi ukuqonda ubuso besifazane ngezandla zombili futhi iya emadolweni ngokuhamba kwesimo sezinyawo ukuya ngakwesokudla nangakwesobunxele.
Manje sisebenza iziqhumane ngokuchofoza komunwe okukhanyayo. Zama ukulawula amandla, ngoba ngokucindezela ngokweqile, kungase kube nemivimbo.
Izinyathelo ezifanayo kufanele zenziwe ngenxenye engezansi yemilenze. Manje ukunyakaza kudinga ukuqala kusukela emadolweni kuya emaqenjini.
Isikhathi esiphelele seseshini ngimizuzu engu-40-60.
Ukushisa kwamanzi okugaya i-lymphatic kulula, kodwa ngesikhathi esifanayo, isilinganiso esiphuthumayo sezifo eziningi, ikakhulukazi lezo ezihlobene nemilenze. Ngokuvakashelwa njalo kumasseur, umuntu uyakwazi ukuqeda ngokuphelele izinkinga zokuzikhukhumeza, imivimbo ye-varicose, isifo sokuzivikela esincane futhi ngisho nesisindo esiningi. Ungakhohlwa ukuthatha isikhathi sempilo yakho, khona-ke impilo yakho iyoba mnandi kakhulu futhi enemibala!
Izakhiwo zokuphulukisa zobumba nokuthi zibhekana kanjani nezinkinga zomlenze
Indlela yokususa ummbila owomile
Ungasusa kanjani ama-calluses emilenzeni yakho
Indlela yokwenza izinyawo zokugaya
U-Andrei Danilko: Luhlobo luni luthando? Anginakho indawo yokujwayele!
Izinzuzo ze-chiromassage yaseSpain
Isaladi kusuka ku-Pekinese iklabishi, i-feta kanye nekhukhamba
Izimfihlo zobuhle kanye nomusa uMichel Mercier
Isaladi lesidlo nge-tuna
Indlela yokugcina izitsha ngendlela efanele
Amasks for face, zokupheka ekhaya
Ukudla okumnandi, ukulahlekelwa isisindo kalula
I-Beetroot Soup namaTamatisi nezinsizi
"Isaladi" lika-Easter unogwaja
Indlela yokubopha izingane zokubopha